Nzvimbo nyowani dzekushanya dzinopaza pasi muHalifax, Nova Scotia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Nzvimbo nyowani dzekushanya dzinopaza pasi muHalifax, Nova Scotia
Kanada Breaking News • tsika nemagariro • Press zvinoburitswa • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Halifax ndiro guta guru renyika yeNova Scotia uye inogara vanhu vangangosvika miriyoni, yakanyura munhoroondo uye mutsika ndiyo yekutanga chiteshi chevanoshevedza vazororo vazhinji veBritish vanosvika mudunhu nendege. Iine epasirose-yepasirose zvinokwezva, yekudyira yakanakisa uye nzvimbo dzakasiyana dzekugara kuti zvienderane nezvose zvinodiwa uye mabhajeti, ndiyo inofanirwa-kuongorora yekuenda kune chero munhu anoshanyira Atlantic Canada.
Iyo SPLASHDOME inzvimbo yehunyanzvi 4D cinema yakagadzwa paHalifax Waterfront, imwe yenzvimbo dzeguta dzine hunyanzvi. Iyo makumi mashanu-tsoka tsoka geodeic dome yakavakirwa nhanho shoma kubva kuMaritime Museum yeAtlantic uye inotora vashanyi pane adrenaline -chaji 50 ° immersive chiitiko chinonzi Bluenose: The Legend Lives. Iyo 360 maminetsi bhaisikopo, iyo yakagadzirirwa kumutsa mimhanzi uye inosanganisira mhenyu chiito chakasarudzika mhedzisiro (tarisira kunyorova!), Inoratidza Nova Scotia yakanakisa pamhenderekedzo yegungwa kuburikidza nenyaya yematunhu ane mukurumbira wegungwa ngarava. Kubudiriro mumatsutso a15, iyo splashtastic kukwezva kunodzoka ino zhizha kunofadza Nova Scotian uye nevanozorora zvakafanana.
Discovery Center ine imba nyowani yemamiriyoni makumi maviri emadhora paHalifax Waterfront. Gadza pamusoro pematuriro matatu, zvinokwezva zvinounza sainzi, tekinoroji, mainjiniya uye hunyanzvi kuhupenyu kuburikidza neruzivo rwekunakidzwa rwekudzidza, maonesheni uye mashopu. Inokodzera kumazera ese, iyo yepakati maficha uye inowirirana 'yekuvandudza lab' pamwe nekucheka-kumucheto planetarium iyo inotora vashanyi parwendo kuyambuka zuva rezuva uye kupfuura kushandisa data kubva kuHubble Telescope. Iyo yepasi pasi yakatsaurirwa kumafambiro ekufamba uye parizvino iri kutamba inomiririra iyo The Science of Rock n Roll; inonakidza maoko-pane chiitiko chekuongorora sainzi kumashure kwemimhanzi yakakurumbira.